Hoso-doko vita amin'ny akora | China Mandoko Mpanamboatra akora, mpamatsy
Titanium dioxide rutile kilasy TiO2 additives plastika
Ny pigment Rutile TiO2 dia mifono zirconia sy alimina amin'ny fomba tsy miaina ary novaina tamina mpandraharaha famaranana organika manokana. Amin'ny maha karazana pigment TiO2 maro karazana sy maha-tanjona azy miaraka amin'ny fotsifotsy tena tsara, fanaparitahana, hydrophilicity ary lipophilicity dia azo ampiharina amin'ny saha maro, ao anatin'izany ny fonosana, plastika, ranomainty ary taratasy.
Beads fitaratra an-dàlambe manara-penitra ho an'ny làlan'ny marika manamarika ny lalambe
Ny vakana fitaratra dia boribory fitaratra madinidinika izay ampiasaina amin'ny loko manamarika arabe sy marika amoron-dàlana maharitra mba hahitana taratra fahazavana miverina amin'ny mpamily ao anaty haizina na toetr'andro ratsy - manatsara ny fiarovana sy ny fahitana. Ny vakana fitaratra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny lalana.
Volana ambongadiny momba ny lalotra ambongadiny ho an'ny lalana marika thermoplastic
Voalohan-dronono mandoko mafana dia ny adhesive ho an'ny fanamarihana ny fiempoana mafana sy ny arabe. Ny solvent organika ao amin'ny primer dia tena mora mandena ny velaran'ny lalana. Na dia mando ny velaran'ny lalana aza ny resin ao amin'ny primer dia manarona ny arabe mifono arafitra ary mamorona sarimihetsika sarona, izay mahasoa amin'ny fitambaran'ilay sarimihetsika mifangaro noforonina tamin'ny hafanana ambony ary manatsara ny firafitry ny tsipika fanamarihana eny ambonin'ny lalana.
Fandokoana sy firakotra Làlana manidina mafana manamarika loko C9 Hydrocarbon résin C9 petrole resin
Izahay dia mamokatra iray amin'ireo resina solika C5 izay manokana amin'ny loko manamarika ny lalana thermoplastic. Izy io dia afaka manatsara ny hamafiny, ny tanjaka ary ny firaiketam-po amin'ny lalana thermoplastic manamarika loko ary mamorona faritra malama. Amin'ny alàlan'ny fampidirana additives, ny resina solika C5 ao anatin'ny fizaran-taona dia ao anaty fanjakana milamina hatrany.